July 2019 – MM Stars
TGIF မှာ သင်ဘာသောက်သင့်သလဲ?
TGIF မှာ သင်ဘာသောက်သင့်သလ? တစ်ပတ်လုံး အလုပ်လုပ် ပင်ပန်းပြီးပြီလေနော် …သောကြာနေ့ ည TGIF မှာတော့ အမောပြေအပန်းပြေလုပ်ရမှာပေါ့ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ကိုယ့်ကို ပြုစုလို့ ရအောင် ဘာသောက်သင့်တယ်ဆိုတာ အဖြေထုတ်ပြီး ပြလိုက်ပါဦး ။ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အဖြေလေးကို သိရဖို့ အပေါ်က ပုံလေးကို နှိပ်ပြီး […]
သင့်ရဲ့ ဘ၀က ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမှာလဲ ?
သင့်ရဲ့ ဘ၀က ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမှာလဲ ? လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကံကောင်းကံဆိုး ဆိုတာ ကြိုတင်ပြောလို့ မရပေမယ့် အနီးစပ်ဆုံးတွက်ချက်ကြည့်နိုင်ပါတယ် သင့်ဘ၀ အပြောင်းအလဲဟာ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက် နေထိုင်မှုပေါ်အများကြီး သက်ရောက်နေတတ်တာမို့သင့်ဘ၀ ဘ်လိုအချိုးအကွေ့ ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာ ခန့် မှန့်အဖြေ ထုတ်ကြည့်လိုက်ပါနော် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာ […]
ဖေ့စ်ဘုခ် ဆယ်လီဖြစ်ဖို့သင် ဘာလုပ်သင့်လဲ?
ဖေ့စ်ဘုခ် ဆယ်လီဖြစ်ဖို့သင် ဘာလုပ်သင့်လဲ? ဒီနေ့ ခေတ်မှာ အွန်လိုင် ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ နေရာရဖို့ လည်း လိုအပ်ပါတယ်နော် လူ့ ဘ၀အမောတွေပြေဖို့ ဖေ့စ်ဘုခ်သုံးရင်း ဆယ်လီဖြစ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိနေပါတယ် . … ။ ဖေ့စ်ဘုခ် ဆယ်လီဖြစ်ဖို့ သင်ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ အောက်ကပုံကို […]